Ogaden News Agency (ONA) – HCH24 – Cabdi Iley oo Laga Dhacay Lacagtuu soo Xaday
HCH24 – Cabdi Iley oo Laga Dhacay Lacagtuu soo Xaday
Wargays lagu magacaabo HCH24 ayaa qoray sheeko dhex martay qoyska Cabdi Iley iyo shirkad laga leeyahay dalka Thailand oo la yidhaahdo “UTAC – THAILAND’S FIRST ICsPRODUCER”. Wargayskan oo af-Faransiis ku qoran ayaa sheegay in shirkaddan oo samaysa qalabka Electronics-ka ay ka dhacday qoyska Cabdi iley lacag gaadhaysa laba milyan iyo badh doolar.
Lacagtaa ayuu wargayska sheegay inuu Cabdi Iley walaalkii, Khadar, ku maalgaliyay shirkadaa 2013kii, hasa ahaatee ay shirkadii diiday inay bixiso. Waxay intaa raacisay inuu Cabdi iley socdaal dhawaan ku tagay Bangkok arintaa darteed hasa ahaatee uu fara madhnaan kala soo noqday ka dib markii shirkadda ay kala dooran siisay inuu dalka ka baxo ama uu maxkamadda dalkaasi ka furo dawcwad. Wuxuu qoray wargayska inuu Cabdi Iley ka cabsaday inuu kiis ka furo maxkamadda si aanay saxaafadda u ogaanin arintaa oo baadhitaan looga samaynin meesha uu kazoo dhacay lacagaha faraha badan.
Xidhiidhka Cabdi iley iyo shirkaddan ayaa bilaabaty 2013kii oo madax ka socota shirkadaa oo tagay Adis Ababa ay isku arkeen halkaa. Ka dib Cabdi Iley ayaa uga qal qaaliyay shirkadda dhul weyn oo laga siiyay gobolka Amxaarada. Shirkadda ayaa beero waaweyn oo suuf ka hawlgashay, hasa ahaatee muddo yar ka dib waxaa lagu qasbay inay bixiso lacag fara badan oo laaluusha ah iyo khamri iyo is-dabamarin canshuuraha ah oo shirkadii kiciyay.
2014kii ayay shirkadii kazoo carartay Itobiya, waxayna u sheegtay Cabdi Iley walaalkii inuusan cag soo dhigin Thailand oo aanu ku fikirin inuu helo lacagtuu ku darsaday shirkadda oy u sheegeen inay u qaateen kharashkii kaga baxay Itobiya iyo beentay u sheegeen.
Wuxuu wargayska intaa ku daray in xog ay ka heleen Wasaaradda Maaliyadda ee Federaalka Itobiya loogu sheegay in baadhitaan lagu hayo lacaga badan oo qasnadda gobolka Somalida ku maqan oo Cabdi Iley bishii lasoo dhaafay looga yeedhay Adis Ababa arimahaa darteed.